Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Rocky Linux - LinuxCapable
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Rocky Linux
Saturday, October 30, 2021 Wednesday, October 6, 2021 by Jọshụa James
Mgbe ị wụnye Linux Rocky, Akaụntụ onye ọrụ emepụtara n'oge mbido mbụ nwere ikike sudo. Agbanyeghị, enwere ike ịnwe mkpa ịgbakwunye ndị ọrụ sudo ma ọ bụ wepu ohere ahụ. Nke a bụ usoro kwụ ọtọ yana iwu ole na ole.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta tinye onye ọrụ na otu sudoers na sistemụ Rocky Linux ọ bụla.
OS akwadoro: Ọ bụla dị ugbu a Rocky Linux OS.
Melite gi Nkume linux sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị kwalitere ruo ugbu a:
Iji mepụta ndị ọrụ sudo ọhụrụ, ị ga-achọ ịgbanwe na mgbọrọgwụ site na iji su iwu. Site na ndabara, nke a kwesiri ka edobe ya mgbe ị na-etinye Rocky Linux. Ọ bụrụ na ị chefuola paswọọdụ mgbọrọgwụ, mgbe ị nọ na ọnọdụ sudo, ị nwere ike ịtọgharịa ya dị ka ndị a.
Ugbu a ka edobere mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ gị gbanwee ka ọ bụrụ mgbọrọgwụ site na iji ihe ndị a iwu su:
N'ime nkuzi nkuzi, aha njirimara a bụ "josh."
Ị mụtala otu esi etinye ndị ọrụ na sistemụ arụmọrụ Rocky Linux gị wee tinye ikike sudo na nkuzi. N'ozuzu, nkuzi a kwesịrị ịrụ ọrụ maka ụdị Rocky Linux niile dị ugbu a na-akwado ma na-atụ aro naanị inye ikike nye ndị ọrụ tụkwasịrị obi ka ha ga-enwe ike ịnweta faịlụ nwere mmetụta na ikike nke sudo nyere.
Categories Nkume linux Tags Sudoers Mail igodo
Otu esi etinye Foxit PDF Reader na Rocky Linux 8